अब हामी भूमिगत हुन्छौँ, कसैसँग भेट्दैनौँ : कमलनारायण दास, अध्यक्ष, क्षेत्र निर्धारण आयोग
Friday 20th of July | २०७५ श्रावण ४ शुक्रबार
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण १६ सोमबार |
निर्वाचनका लागि अति आवश्यक मानिएको क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएर काम पनि सुरु भएको छ । आयोगले के कसरी काम गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा ऋषि धमलाले आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दाससँग कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
क्षेत्र निर्धारण आयोगमा बसेर तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
तोकिए बमोजिमको काम गरेर बसेको छु ।
क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई दल तथा तिनका नेताहरुले के सुझाब दिएका छन् ?
त्यो अहिले भन्न मिल्दैन । जति पनि छलफल भएको छ, त्यो सबै कार्यविधि अनुसार गोप्य राख्नुपर्छ ।
नेताहरुले केके भनेका छन्, भन्नुस न ।
हाम्रो कार्यविधिमा स्पष्ट लेखेको छ । जति पनि आयोगमा छलफल हुन्छ, ति कुरा अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । अहिले नै सबै कुरा भन्न थालियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
सार्वजनिक गर्नै नमिल्ने हो ?
समय आएपछि सबै कुरा सार्वजनिक गरिन्छ । अहिले चाँही मिल्दैन ।
काम कसरी गरिरहनुभएको छ ? चुनौति केके छन् ?
चुनौति धेरै छन् । नीति बनाएर काम गर्ने तयारीमा छौँ । छलफलको कार्यक्रम सकिएको छ । अब हामी कसैसँग छलफल गर्दैनौँ । २ दिन चाँही इन्टरनेटबाट राय सुझाब लिन समय बाँकी छ । त्यसपछि आन्तरिक कार्य सुरु गछौँ । तर समय समयमा संचारमाध्यमलाई जानकारी गराउँछौँ ।
तपाईहरुले क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ दिँदा दिँदा थाकिसके । हामी कामप्रति प्रतिबद्ध छौँ । हामीले अहिलेसम्म आधारभूत काम सकिसकेका छौँ । सबै क्षेत्रको तथ्याङ्क संकलन गरिसकेका छौँ । अब हामी भूमिगत भएर काम गछौँ । कसैसँग भेट्दैनौँ । काम मात्रै गछौँ । त्यसपछि रिपोर्ट लेखेर बुझाइदिन्छौँ ।
आयोगले समयमा नै काम सम्पन्न गर्न सक्छ ?
हामी तोकिएको समयसिमा २१ दिनभित्र नै क्षेत्र निर्धारणको काम सक्छौँ । प्रमुख दलका नेताहरुले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
डा. केसीको जीवन तलमाथि भए कांग्रेसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ : नेता बडाल
संघ संस्थाको नाममा यातायात व्यवसाय चल्दैन, सिन्डिकेट हटेन भने राजिनामा
अस्पताल त काठमाडौंमा पनि प्रशस्तै छन् नि, प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि किन थाइल्याण्ड ?
संघीयता घाँटीमा अड्कियो,डा केसीको माग पूरा गर्नुपर्छ: चित्रबहादुर केसी
सरकार बदनाम हुँदै गएको छ, हाम्रो समर्थन फिर्ता हुन सक्छ : नेता कर्ण
कांग्रेस नेता यादव र नेकपाका नेता पाण्डेबीच भनाभन(भिडियो)
सरकार क्रुर भएर प्रस्तुत:'प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बनेर नाङ्गै हिँड्छन भने पाँच वर्ष काम गर्न पाउँदैनन्'
राजपा पनि सरकारमा गयो भने मधेश मुद्दा विलिन हुन्छ : सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल
सरकार प्राज्ञिक क्षेत्र तहसनहस पार्न लागिरहेको छ : प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइराला, उपकुलपति
सरकार मेडिकल माफिया, कालो कोट, एनजिओ र ठेकेदारको घेराबन्दीमा छ : नेता भण्डारी
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई अहंकारयुक्त, नतिजा राम्रो हुँदैन : महत
प्रदेश र केन्द्र सरकारले ‘वीरगन्ज’को महत्व बुझेको छैन : सरावगी
झोलुंगे पुलबाट पच्चिस सय घरधुरी लाभान्वित
पाँचसय घरलाई ग्यास सिलिण्डर र चुलो
प्रदेशसभा बैठकलार्ई सम्बोधन
स्कूलको बस दुर्घटना
Eleven bridges constructed in Myagdi district this year
Some 1200 households in darkness
नेपालीबाटै ठगिँदै छन् केमान टापुमा
नहर बगाएपछि लघु जलविद्युत् बन्द
आन्दोलनकारीको ढुंगा लागेर महिला प्रहरी घाइते
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको पत्रले इन्स्योरेन्सका मालिकहरु चकित
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख पोखरेलको कामले उत्पात तनाब !
त्यो पनि नेपालमै ! लिङ्ग सानो भयो भन्दै श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद
भदौदेखि मोहियानीहक पूर्ण रुपमा खारेज हुँदै